ခင်မင်းဇော်: ခရီးသွား မှတ်တမ်း ၂
Posted by ခင်မင်းဇော် at 5:14 PM
အမရေ မအားတဲ့ကြားကစာတွေရေးနေရတယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်တွေကို စောင့်ဖတ်နေပါမယ်ဗျာ..
စာတွေများပြီး ဓါတ်ပုံတွေလည်း ထင်သလောက် မပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီး အများကြီး အများကြီး တင်ပါလား ခင်ဗျ။ :P
ရွာသားလေးရေ.. ဒီလိုပဲ ရေးချင်တဲ့အချိန်နဲ့ အားချိန်တိုက်ဆိုင်ရင် ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်တာပဲပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား..
ကိုဂျူလိုင် .. လာနောက်တယ်ပေါ့...
ပထမတင်တာ ဓါတ်ပုံတွေများနေပေမယ့် ပို့စ်က ပျောက်သွားလို့ ပြန်တင်ရတာလေ..
အမရေ ဆွီဒင်ကိုတောင် ရောက်သွားတာကို။
အစစ်ပဲ swedish တွေက ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် လူမျိုးခွဲခြားမှု ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်ကြားဖူးတယ်။ yellow and dark skinတွေအပေါ်ဆိုပိုသိသာတယ်ပြောကြတယ်။
အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနည်းတယ်..လို့ ဆွီဒင်ရော နော်ဝေမှာပါနေ ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူး၊ လုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ဆီကလေ့လာခဲ့ရဖူးတယ်။
Thanks for sharing. I haven't been there. hopefully next year.
ခုတော့ ဓါတ်ပုံဆရာ ဖြစ်နေပြီပေါ့လေး)
ခရီးသွားခြင်း ခုံမင်သူမို့ ခရီးသွားသူတယောက်အကြောင်း လာဖတ်ပါတယ် အမ.....။
သတင်းထောက်လို့ မပြောရဘူး။ ရေးတာကိုက သတင်းကြေငြာချက်ကျနေတာပဲ။ အသည်းကြီးကို လွမ်းတာလေးများ ပိုပိုမိုမို ထည့်ပါတော့လားလို့.. ကတည်းး
ပန်ပန် .. လှပေမယ့် တယောက်တည်းဆို ပျင်းစရာကြီး
ကမောင်ရင်.. အဟုတ်ပဲ ဆွီဒစ်တွေက ခွဲခြားမှု ရှိတယ်။
ကိုထွတ်.. USသွားတုန်းက အမတောင် မသိလိုက်ဘူး။
steve evergreen... လန်ဒန်ကို လာခဲ့ဦးမယ်နော်။
ကိုအောင်သာငယ်.. တီဇက်အေကို အားကျပြီး ရိုက်လာတာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်..
ဒူကဘာ... ခရီးချည်း ထွက်နေရလေ ကြိုက်လေပဲဆိုပေမယ့် အမပီအေ မပါလာတော့ မပျော်နိုင်ဘူးပေါ့။ ကိုယ်ချင်းစာ..
ဆင်ဒဏ်လာ.. ဟိ ကိုပေါတို့ခေါ်သလို ခေါ်ကြည့်တာ. ကျေးဇူးနော် လာအားပေးတာ
မေငြိမ်း... သယ်ရင်း.. ဒါကတော့ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ပေါ့ဟာ..
သမီးစိုးဝှက်.. ပျော်မယ်ထင်လား.. ဟင့်
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် နှံ့အောင်သာ လည်ပေတော့ဗျိုး။ ဒီတခါ မင်းသမီးပုံ မပါပါလားဗျာ။း-)
အမရေ.. သတင်းဌာန သုံးမျိုးရဲ့ တူညီတဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ရပ်တည်ချက် တွေကို သိချင်ပါတယ်။ တပို့စ်လောက် ပြောပြပေးပါလား။ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျို့
အားကျလိုက်တာ။ ထပ်ရေးပါအုံး။ ခရီးသွားနေလို့ အသစ်တင်တာ မသိလိုက်ဘူး။
ချမ်းလဲ ချမ်းတယ် လွမ်းလဲ လွမ်းတယ် ပေါ့လေ။
ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေဖတ်သွားတယ်အစ်မရေ။ ဘဝဒိုင်ယာရီလေးလဲ ပြန်ဆက်ပါဦးနော်။
အခု မခင်မင်းဇော် ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းအားပေးနေပါတယ်